Zava-dehibe ve ny taonan'ny SEO?
Misy fifandraisana misy eo amin'ny sehatry ny sehatra sy ny SEO ao amin'ny Google promotion promotion? Ity fanontaniana momba ny Search Engine Optimization sy ny fomba ahafahana mifandray amin'ny daty fisoratana anarana dia zava-dehibe iray, izay matetika no resahin'ny mpahay siansa manam-pahaizana manokana, ary koa ireo tompona orinasa an-tserasera.
Amin'ny ankapobeny, ny gurus indostria dia mamintina fa ny valin'ny taom-pivoarana sy ny vokatra SEO dia manao zavatra an-tanana. Matetika, ny hevitr'izy ireo amin'izao fotoana izao momba ny halehiben'ny sehatra an'ny SEO, dia hafa tanteraka, na dia mbola misy heviny ihany aza: 1)
ny taonan'ny sehatra dia tsy misy fiantraikany amin'ny SEO, ary avy eo amin'ny Google Ny laharam-pahamehana amin'ny isa
isaky ny taom-piraisana dia singa iray manokana eo amin'ireo marary amin'ireo toetra hafa tafiditra ao amin'ny algorithm Google
ao amin'ny sehatry ny sehatra, izay manana anjara toerana manan-danja ho an'ny toerana ambony ao amin'ny SERP
Ankoatra izay, misy lafiny roa manan-danja ao ambadiky ny adihevitra amin'izao fotoana izao momba ny taonan'ny sehatra sy ny SEO:
amin'ny fampiasana ny lojika izay ampiasaina amin'ny spam mametraka ireo domains vaovao ao amin'ny rejisitra ary manaparitaka azy ireo haingana, ireo anarana vao voasoratra anarana dia matetika ampiasaina amin'ny tranonkala spamming
amin'ny alàlan'ny lojika mivadika, anarana iray taloha dia midika fa ny tranonkala dia tsara sy mendrika, toy ny lavadrano
Eny, hitantsika ny fisalasalana be dia be eto. Saingy zavatra tokana azoko lazaina aminareo marina - tsy misy dikany ny taonan'ny domi-piarahamonina rehefa heverina ho toy ireo izay manana azy - маска сети маршрутизатор. Midika izany fa rehefa misy fanjakana manana faharetana maharitra sy madio ao amin'ny rakitsoratra Google, dia tsy hitondra fiantraikany ratsy ho anao izany, raha manapa-kevitra ny hividy anarana nomena anarana efa misy taloha ianao. Etsy andaniny anefa, misy "domelina maro" marobe, na dia efa fantatra ho toy ny spam aza, na voaheloka mihitsy aza Google atsy ho atsy.
Mba hisorohana ny fitrangan-javatra mampalahelo tsy hitranga, ny manam-pahaizana dia manolo-kevitra amin'ny famoahana ireo sehatra amidy ihany, izay nahazo ny vaovao ho an'ny daholobe. Eny, ireo mpampihorohoro dia mety hanana fiarovana manokana momba ny fiainana manokana, ohatra ny amin'ny fanontaniana queries, tokony ekeko. Na izany aza, mety hitondra ahiahy manodidina azy ireo izany.
Amin'izany fomba izany, manoro hevitra ny fananana fanamarinana indroa ny vanim-potoana sy ny tantarany aho alohan'ny hanaovana fifanarahana. Ary misy rafitra mahasoa maro azo atao amin'ny fidirana mivelatra mba hanamarinana raha nisy anaran'olona nomena anarana voasoratra. Azonao atao, ohatra, azonao atao ny manandrana ny fitaovana Netcraft mba hahafantarana raha toa ka asehon'ny Google mikaroka bots ny sambokely voalohany. Raha manao izany ianao, dia azonao atao ny mamantatra ny anaran'ny nomerao be mpampiasa indrindra nomena ho azo itokisana, satria izy ireo dia nomena ny vokatr'izy ireo maharitra, ary avy eo dia miorina tsara ao amin'ny SERPs.
Mariho anefa, ny soso-kevitro dia tsy midika velively fa ny anaran'ilay sehatra vaovao noforonina dia tsy azo ihodivirana mihitsy ny ady amin'ny mpifaninana efa zokinjokiny, noho izany dia manana fahombiazana kokoa ny hiakatra any ambony amin'ny valin'ny fikarohana. "Ny zokiny dia ny anaran-toerana anananao, ny laharana ambony azonao" - izay tsy mety ho 100% azo antoka. Mahatsiaro fotsiny, fa misy fe-potoana tsara atao ny fiantraikany amin'ny fahefam-panjakana, tokony hiaiky izahay. Na izany aza, na izany aza, ny taonan'ny sehatra amin'ny SEO dia mbola mitondra ny tranokalan'ny tranonkala amin'ny fombany manokana, na tsara na ratsy.